Ra’iisulwasaare Ku Xigeenka DF oo Afka Amxaarada Ku Khudbeeyay. – Shabakadda Amiirnuur
Ra’iisulwasaare Ku Xigeenka DF oo Afka Amxaarada Ku Khudbeeyay.
December 9, 2017 9:33 am by admin Views: 125
Mahdi ayaa amaan kala dul dhacay Xabashida isagoo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ka qeyb galka munaasabaddan. Waa nin heysta dhalashada Ingiriiska. Wuxuu jaamacad uga baxay dalka Itoobiya. Wuxuu usoo shaqeeyay hey’adda UNDP. Waxaa dowladda kusoo dartay Itoobiya.
Itoobiya ayaa Soomaaliya u degtay istaraatiijiyad ka daran dagaalka xabadda ah kadib markii ay madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa DF caado ka yeesheen in sannad walba ay dalkaasi u dhoofiyaan boqollaal arday ah oo ka baxday dugsiyada sare si ay jaamacadahooda ugu soo dhameystaan Adis-ababa. Haddaba aqristow, ma isweydiisay waxa laga filan karayo arday kasoo baxay Jaamacad ku taalla Itoobiya?